Okwezinhlanzi yiwebhusayithi eye-AB Internet, ekhethekile ngezinhlobo ezahlukene zezinhlanzi ezikhona kanye nokunakekelwa ezikudingayo. Uma ufuna ukufunda ukuthi ungazinakekela kanjani kahle sizokufundisa ukuthi ungakwenza kanjani ukuze ukwazi ukujabulela ama-aquariums ngendlela engakaze ibonwe ngaphambili. Ngabe uzoyikhumbula?
Ithimba lokuhlela lamaDe Peces lakhiwa iqembu labathandi bezinhlanzi beqiniso, abazohlala bakunikeza izeluleko ezinhle kakhulu ukuze ubanakekele kahle kakhulu. Uma unentshisekelo yokusebenza nathi, gcwalisa ifomu elilandelayo futhi sizoxhumana nawe.
Ukufunda isayensi yezemvelo kunginike umbono ohlukile ngezilwane nokunakekelwa kwazo. Ngingomunye walabo abacabanga ukuthi ungaba nezinhlanzi njengezilwane ezifuywayo, inqobo nje uma bezonikezwa ukunakekelwa okuthile ukuze izimo zabo zokuphila zifane nemvelo yabo, kepha ngaphandle kokukhubazeka ukuthi kufanele baphile futhi bafune ukudla. Umhlaba wezinhlanzi uyathandeka futhi nami uzokwazi ukuthola konke ngakho.
NgingumColombia, umthandi wezilwane ngokujwayelekile futhi ikakhulukazi izinhlanzi. Ngiyathanda ukwazi izinhlobo ezahlukahlukene, futhi ngifunda ukuzinakekela ngokusemandleni ami futhi ngiyazi ukuze ngizigcine ziphilile futhi zijabule, ngoba izinhlanzi, yize zincane, zidinga ukunakekelwa ukuze ziphile.
Izinhlanzi yilezo zidalwa ezinhle ongabona ngazo umhlaba kusuka komunye umbono kuze kufike ezingeni lokufunda okuningi ngokuziphatha kwazo. Umhlaba wezilwane uyaheha njengomhlaba womuntu futhi eziningi zazo zikunika uthando, inkampani, ukwethembeka futhi ngaphezu kwakho konke zikufundisa ukuthi ngezikhathi eziningi zingakususa ukuphefumula. Kodwa-ke, akumele sikhohlwe izinhlanzi nokuziphatha kwazo, yingakho ngilapha, ngilungele ukuhlanganyela lo mhlaba omuhle kangaka. Uyabhalisa?
Ngikhathalele imvelo nezwe lezilwane, ngiyakuthanda ukufunda nokutshela izinto ezintsha ngezinhlanzi, izilwane ezingabambeki, kepha futhi ezokuzijabulisa. Futhi uma wazi ukuthi ungaziphatha kanjani, izinhlanzi zakho nakanjani zizokulungela impilo yonke.
Ngithande inhlanzi isikhathi eside. Noma ngabe kuyashisa noma kuyabanda, kumnandi noma kunosawoti, konke kunezici nendlela yokuba ngithole ukuthi kuyangithakazelisa. Ukutshela konke engikwaziyo ngezinhlanzi kuyinto engiyijabulela kakhulu.
Ngithanda ukubhukuda i-snorkel nokubhukuda olwandle uma ingekho i-jellyfish. Oshaka baphakathi kwezakhamizi zasolwandle engizithandayo, bahle kakhulu! Futhi babulala abantu abambalwa kakhulu kunamakhukhunathi!
Ngiyakujabulela ukubhala ngezilwane futhi ngifisa ukwazi kakhulu ngomhlaba wezinhlanzi, okuholela kimi ekucwaningeni futhi ngifuna ukuhlanganyela ulwazi lwami ngazo.
Ngazalwa ngo-1981 futhi ngiyazithanda izilwane, ikakhulukazi izinhlanzi. Ngithanda ukwazi konke ngabo, hhayi kuphela ukuthi bazinakekela kanjani, kodwa nokuthi indlela abaziphatha ngayo iyisibonelo. Banelukuluku lokwazi, futhi ngokunakekelwa okuncane kakhulu bangajabula ngempela.